February 2020 – Page 14 – Ayyaantuu
Naannoo Amaaraa Gondar, Azazootti Qabeenyi Muslimaa barbadaa’ee Naannoo Amaaraa Gondar, Azazootti har’as (Feberuary, 1, 2020) qabeenyi Muslimaa Birrii Miiliyoona baay’eetti shallagamu garee Faannoo jedhee of waamuun barbadaa’eera. Suuqiiwwan, Manneen nyaataa fi manneen daldalaa garagaraatu barbadaa’e. Dukkaanni [Read more]
Waraana Bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf maaliif duulama? Duubi isaa maali? WBO’n humna ijaaramaa haqaan kaayyoof akeeka qulqullooftuun taliigamuudha kan alagaanillee itti hinaafu Albuuda gati-jabeessa Oromooti. egaa warqeen wayita qubarraa qaban sibiila namatti fakkaatti akkuma jedhan sana [Read more]
Ajjeechaa ilmaan Oromoo Lixaa irratti raawwateen daataa Oromoo Lixa Oromiyaa Wallaggatti ajjeefamanii Amajji 20 torvan tokkoo asitti muraasa kan maqaa isaanii arganne. Kan kanaa gadii ta’us uummanni nagaan wareegame kumaa olitti tilmaamama. Qeerroo Bilisummaa Oromootiin [Read more]
OMN: Qeerroo Oromiyaa Lixaarraa Gambeellaatti Baqatan, Guraandhala 01, 2020
OMN: Qeerroo Oromiyaa Lixaarraa Gambeellaatti Baqatan (Guraandhala 01, 2020) About 21 innocent people were killed in Gidami after being shot by military government led by emperor Abiyi.Their list is as follows. 1.Abdiwak Arga 2.Arfase Abdisa [Read more]
Afaan Qawwee jalatti nagaan hinyaadamu, hinargamus! Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Gurraandhala 1,2020 Uummata deettiin/jumulaan ajjeesuu, hidhuu fi shamaraaf dubartii Oromoo gudeeduu dabalatee yakki sussukanneessaan uummata quunnamtiin hawwaasaa marti irraa cite irratti baatii tokkoo oliif deemaa jira. [Read more]
Shira Xaxuun Dhugaa dhokasuuf Yaaluun Dhugaa Dhabamsiisu Hin Danda’u! Damee Boruu: Amajjii 31, 2020 Dhugaa owwaaluu halkanii fi guyyaa shira xaxuuf yoo dhama’an iyyuu akka bakkalcha barii bola boldogi jedhee baha. Mootummaan Kononeel Abiyi WBO [Read more]